ဒီမိုကရေစီနှင့် မထိုက်တန်သော ဘာသာရေးလုပ်ရပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒီမိုကရေစီနှင့် မထိုက်တန်သော ဘာသာရေးလုပ်ရပ်
ဒီမိုကရေစီနှင့် မထိုက်တန်သော ဘာသာရေးလုပ်ရပ်
- ko speaker
Posted by ko speaker on Jul 13, 2012 in Copy/Paste | 17 comments
ကိုပါကြီးရဲ့“ကလော၊ အောင်ပန်းမှ ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှု” ဆောင်းပါးကို ဖတ်မိ၍ ဒီ Post ကို ရေးလိုက်ရပါသည်။
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ မိုးပြာသည်
ဗုဒ္ဓဟောကြားသည့်တရားအပေါ် ဘုရားဟော ဟုတ်၊ မဟုတ် သတ်မှတ်ချက်မတူမှုနှင့်
ဘုရားဟောအပေါ်ဖွင့်ဆိုမှု မတူကြသော မဟာယာန၊ လာမား၊ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ကဲ့သို့
သီးခြား ဗုဒ္ဓဘာသာအယူဝါဒကွဲများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
ထေရ၀ါဒသည် သေပြီးနောက်ကိစ္စများကို အဓိကထားလမ်းညွှန်ပြပြီး
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒသည် လူရှင်သန်နေစဉ်အတွင်း အမှုကံတွေကောင်းအောင်နေတတ်ဖို့ကို
ထေရ၀ါဒသည် သေပြီးနောက်ကိစ္စများကို ဘုရားဟောသည်ဟု ယုံကြည်ကြပြီး
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒသည် အဗျာကထာနတရားတော်များအရ သေပြီးနောက်ကိစ္စများကို
ထေရ၀ါဒသည် ဘုရားဟောပါဠိတော်တို့ကို ပရမတ္တသစ္စာဖြစ်သော ရုပ်၊ နာမ်ရှုမှုများဖြင့် ဖွင့်ဆိုနားလည်ပြီး
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒသည် ဘုရားဟောပါဠိတော်တို့ကို အရိယသစ္စာဖြစ်သော လူ့အမှု ကံ သင်္ခါရ အကြောင်းအကျိုး အသိအမြင်ဖြင့် ဖွင့်ဆိုနားလည်ကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
ထို့ကြောင့် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာတို့သည် မဟာယာန၊ လာမား၊ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ကဲ့သို့ ဘုရားပါဠိတော်သတ်မှတ်ချက်များမတူကြသလို
သို့အတွက်ကြောင့် ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ မိုးပြာသည် ထေရ၀ါဒလက်အောက်ခံ ဂိုဏ်းကွဲတစ်ခုမဟုတ်ပဲ ထေရ၀ါဒနှင့် အယူဝါဒ မတူသော မဟာယာန၊ လာမား၊ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ကဲ့သို့ သီးခြား ဗုဒ္ဓဘာသာဝါဒကွဲတစ်ခုသာလျှင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
http://www.ariyathitsa.org/ ပစ္စုပ္ပန္န ကမ္မဒဿန အရိယသစ္စာ ၀က်ဆိုက်တွင် လေ့လာလို့သိရပါသည်။
အဆိုပါ သီးခြားဗုဒ္ဓဘာသာဝါဒကွဲတစ်ခုဖြစ်သော ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ပတ်သက်၍
ကလောနှင့် အောင်ပန်းမြို့ရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့ကို ထေရ၀ါဒ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ မိုးပြာအယူကိုးကွယ်သူများဟု စွပ်စွဲကာ အယူဝါဒစွန့်လွှတ်ဖို့
အတင်းအဓမ္မလက်မှတ်ထိုး စေခိုင်းသော လုပ်ရပ်သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပါ
နိုင်ငံသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ကို အလေးမထားသလို အပြုအမူများဖြစ်နေပါသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မကြီး ဦးဆောင်သော အစိုးရအဖွဲ့ကြီးမှ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် အညီ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ဆီသို့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ
ဘာသာရေးမှ ထေရ၀ါဒီအဖွဲ့အစည်းတချို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်သော အဆိုပါ လုပ်ရပ်များသည် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအတွက် အနှောက်အယှက်များဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရပေသည်။
သို့အတွက်ကြောင့် ဒီမိုကရေစီလိုလားသူ နိုင်ငံသားတစ်ဦးအနေနဲ့
ကလော၊ အောင်ပန်းမှ ဘာသာရေးဖိနှိပ်နေမှုများအား ရှုံ့ချလိုက်ရပါသည်။
About ko speaker
ko speaker has written2post in this Website..
View all posts by ko speaker →
ကမ္ဘာ့မှာ ဘာသာရေးအဖိနှိပ်ဆုံးနိုင်ငံ.. အဆင့်၎-၅ကနေ.. ၁ ကိုတက်ချင်လို့နေမှာပေါ့..
နှစ်၁၀၀၀ ကျိန်စာ… :?
ကျော်လွန်မှာ စိုးလို့ 
(၁) ပထမအချက်ဖြစ်တဲ့ ဂေါတမဗုဒ္ဓက ဟော လို့ပရမတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ရှင်းချင်ပါတယ်။ ဂေါတမကဟောလို့ ပရမတ်အဖြစ်တည်တာမဟုတ်ပါဘူး။ လောကရဲ့ ဖြစ်ပျက်ပြုပြင်မှု ရဲ့ပရမတ်ဖြစ်တည်မှုကိုအနုလုံပဋိလုံကြောင်းကျိုးဆင်ချင်ရှင်းပြ တာကဗုဒ္ဓပါ။ ဟောလို့ပရမတ်ဖြစ်ရတာမဟုတ်ပါ။ ပရမတ်သဘောကိုဖွင့်လှစ်ရှင်းပြတာပါ။ ပရမတ်ကိုသက်သေထူနိုင်နိုင်တဲ့ ညဏ်ပညာကြီးမားလို့ သဗ္ဗညု ဆိုတဲ့အထွတ်အထိပ်ညဏ်ရည် ကိုရတာပါ။
(၂) မှန်ပါတယ်။ သာဿနာဆိုပြီး မိမိယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာကို တခြားသူကလာနှောင့်ယှက်ဖျက်စီးတာဟာ၊ ရှိခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတိုင်းကခွင့်မပြုသလို၊ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့လည်းဖြောင့်ဖြောင့်ကြိးဆန့်ကျင်ပါတယ်။ တခါ- သာဿနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာတခုတည်းကိုဇောက်ချပြီးအားပေးတာ၊ သာ၊ထွန်း၊ပြန့်ဆိုပြီး ကျန်ဘာသာယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေလှုပ်မရအောင် ချုတ်တည်းတာကလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဗြောင်ဆန့်ကျင်တာနဲ့အတူတူပါဘဲ။ ဘာသာရေးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး အစိုးရက ရှိသမျှ မောင်ပိုင်သိမ်းတာလည်း ညစ်ပါတ်ခြင်းတမျိုးပါဘဲ။
မတူတိုင်းသာ အဲဒီလိုမျိုးလိုက်ပြီး အတင်းအကြပ် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းမယ်ဆိုရင် သူတို့နဲ့ မတူတဲ့ ဘာသာခြားတွေရှိ သလို၊ ဘာသာဝင် အချင်းချင်းတောင်မှဘဲ ဂိုဏ်းတွေ အမျိုးမျိုးရှိနေတာဘဲ..
လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ခွင့်ပေးထား ပါလျှက် ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ ဥပဒေ ရဲ့အထက်မှာ ဘယ်သူတွေရှိနေလဲ?
ဒီလူတွေကို ဘာမှ မပြောရဲလောက်အောင် အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတုံးက သူတို့ပါခဲ့လို့လား?
အခုလက်ရှိ ညီလာခံမှာ လည်း သူတို့တတွေ တစ်ယောက်မှ မပါပါဘူး?..
အဲဒီလူတွေကလည်း ငါတို့ဟုတ်လှပြီ လို့မထင်နဲ့ တကယ် လိုအပ်လာရင် အ၀တ်မရွှေးဘူး နိုင်ငံတော်က
လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်မှာဘဲဆိုတာ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်မှာ သတိထားသင့်တယ်…သင်ခန်းစာယူသင့်တယ်..
ကျွန်တော်ထင်တာ ဒီအဏာလွန်စွဲပွဲ နှစ်ခုကြားမှာ အမှန်တရားဖက်ကို ရပ်တည်ပေးတဲ့ ဘုရားသားတပည့်
အစစ်အမှန်တော့ လိုနေပြီ လိုမြင်မိပါကြောင်း?…..
ဒီကိစ္စတွေမှာ ဘယ်သူတွေမှာ အဓိကတာဝန်ရှိသလဲဆိုတော့ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာတရားတွေကို သမာသမတ်ကျကျ ဘက်မလိုက်ပဲ ထိန်းသိမ်းပေးရမယ့် သာသာနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီနဲ့ ထိုက်တန်သော သာသနာရေးဌာနဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်ဟု ကွန်မန့်ဖြင့်ထပ်မံရေးလိုက်ရပါသည်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် သာဿနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဆိုတာ မရှိသင့်တဲ့ဌာနကြီးတခုထဲမှာ အပါအ၀င်ပါဘဲ။ တကယ်ဘဲ rule of law နဲ့ လွတ်လပ်၍တရားမျှတသော ဗြဟ္မာစိုရ် တရားဆိုတဲ့ ဝေါဟာရရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ကိုနားလည်ကြမယ်ဆိုရင်….
ထောက်ခံပါတယ် maungmoenyo ခင်ဗျာ . .
သူကြီး kai ခင်ဗျာ . . . ။
ကျနော်တင်ခဲ့သော “ကလော၊ အောင်ပန်းမှ ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှု”
http://myanmargazette.net/137454/uncategorized-other/copypaste ပိုစ့်အောက်တွင် ကွန်မန့်ဘောက် မပေါ်ပါသဖြင့်
ကွန်မန့်ဘောက် ပေါ်အောင်ဖွင့်ပေးစေလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဂေးဇတ်ရွာထဲရှိ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ မှတ်ချက်သံလေးများ ကြားလိုလို့ပါ။
ဒီမိုကရေစီနည်း အရ သော်လည်းကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ သော်လည်းကောင်း၊ အမှန်တကယ် စဉ်စားကြမည်ဆိုလျှင် သာ-ထွန်း-ပြန့် ဌာန သည် ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုထဲအတွက်သာလုပ်နေ၍ မတရားပါ။ တရားမျှတစွာစဉ်းစားလျှင် အခြားဘာသာများအတွက်ပါ သီးခြားဌာနခွဲများဖွင့်ပေး၍ သာသနာပြန့်ပွားရေးလုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကဲ ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲ?
ဂျပန်ဖက်စစ်၏ လက်ကိုင်ဒုတ်က . . . . ကင်ပေတိုင် . . .
စစ်အာဏာရှင် န၀တ၏ လက်ကိုင်တုတ်က ကြံဖွတ်အသင်း . .
ဘာသာရေးအာဏာရှင် မဟနအဖွဲ့၏ လက်ကိုင်တုတ်က သာ-ထွန်း-ပြန့် ဌာန
ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ ဘာလက်ကိုင်တုတ်မှမလို . . .
ကိုယ့်တရားကိုယ် ယုံကြည်ဖို့သာလို . . . ။
တကယ်တော့ အောင်ပန်း၊ ကလောကိစ္စတွင် ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိတဲ့ ထေရဝါဒအုပ်စုရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မဝါဒ အုပ်စုအပေါ် ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်အနိုင်ကျင့်မှုတွေဟာ ဘာသာရေးလောကအတွက် ငြိမ်းချမ်းသုခ ရနိုင်ပြီး ပြေငြိမ်းနိုင်ဖို့ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ပိုပြီးတော့သာ မပြေလည်၊ ဆိုရွားမှုတွေဖြစ်ပြီး အနိုင်ကျင့်နေတဲ့သူတွေရဲ့အမှုတွေကို အသိပညာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အသိဥာဏ်ထဲမှာ ကြာလာလို့ အမှန်ကိုသိလာရင် အထင်သေး၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်တွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
တကယ်တော့…ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဟာ…စားပွဲဝိုင်းမှာထိုင်ပြီး ဘာသာခေါင်းဆောင်အချင်းချင်း သဘောထားကြီးစွာ ညှိနှိုင်း၊ တိုင်ပင်၊ ဆွေးနွေးတဲ့ အဆင့်ကိုရောက်မှ ပြေလည်လာမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
အထက်က ကိုစပီကာပြောသလို ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို လှမ်းလင့်ချီနေချိန်မှာ ဘာသာရေးဆိုတာကလည်း လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ် ယုံကြည်ခွင့်တော့ ရှိရမှာပေါ့။ ရှိသင့်တာပေါ့။
သူဟာသူ ဘာကိုယုံကြည်လို့၊ ဘာကိုပဲ ကိုးကွယ်နေပါစေ…အရေးကြီးတာက ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိတွေ့ ဆက်ဆံနဲ့အခြေအနေမှာ ပြဿနာမဖြစ်ပဲ ငြိမ်းချမ်းနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကိုးကွယ်… အစိုးရအနေနဲ့၊ အုပ်ချုပ်သူတွေအနေနဲ့…ခွင့်ပြုဖို့လိုအပ်ပါကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဘာသာတရားဆိုတာ ယုံကြည်မူနှင့်ဆိုင်သည့်အတွက် မျက်လုံးမှိတ်ပြီးမကိုးကွယ်ပါနှင့် လေ့လါပါ၊
ဘုရားသာသနာ မဟုတ်ပဲ သိကြား (အုပ်ချုပ်သူအစိုးရ) သာသနာ ဖြစ်နေလို့ ဒီလိုဖြစ်နေရတာပါ။
” သိကြားသာသနာမှ ဘုရားသာသနာသို့ “တွင် အကျယ်ရေးထားပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီဟု ဗန်းပြကာ အယူဝါဒမှားများ သွတ်သွင်းလိုသူ၏ ရေးချက်!
ဒီမိုကရေစီ ဒီမိုကရေစီဟု ပြောကြကာ
ထေရ၀ါဒီတွေရဲ့ လုပ်ရပ် ;)
ကို speaker ကကောဘယ်ဘာသာယုံကြည်ကိုးကွယ်ပါသလဲခင်ဗျာ………